Thenga Isihlungi Samanzi Ephathekayo Nokusinda & Isihlungi - Ukuhanjiswa Kwamahhala & Ayikho Intela | WoopShop®
Ephathekayo Outdoor & Ukusinda Water purifier & Hlunga
$ 17.99 Intengo ejwayelekile $ 34.99
Ihamba ngemikhumbi Inhlangano yase Russia China Australia I-united states
I-Blue / Russian Federation Okuluhlaza / China Oluhlaza okwesibhakabhaka / e-Australia Luhlaza okwesibhakabhaka / United States
Ephathekayo Yangaphandle & Yokusinda Amanzi Okuhlanza & Hlunga - Luhlaza / China ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Uhlobo: Isihlungi Samanzi
Thayipha: Isihlanza Samanzi Sangaphandle
Inani: I-PC ye-1
Izinto: ABS, PE
Hlunga impahla: ulwelwesi lwe-ultrafiltration, i-carbon eyenziwe yasebenza
Usayizi: 22.5 * 3.0 * 3.0cm
Isisindo Net: 90.0g
Izici: Amatebhe amaningi
Izici ezikhethekile: Isistimu yokuhlunga enezigaba ezine! Isihlungi Samanzi asiqukethe amakhemikhali, awekho amabhethri, futhi akukho zingxenye ezihambayo zokuguga.
Qeda Ngokushesha Ukoma Kwakho: Ifaka isilinganiso sokugeleza okuphezulu
Isebenziseka kalula: Yifake emanzini uphuze ngqo!
Iphephe kakhulu: susa ngokuphelele amagciwane negciwane, ungaqeda i-99.99%
1 x Isihlungi Samanzi
Izihlungi zokuhlanzwa kwamanzi zihambisana nencazelo. Ngizohlunga kanjani amanzi ngizohlola ngokuhamba kwesikhathi.
Umkhiqizo omuhle kakhulu nencazelo eyiqiniso
Kuyafana nencazelo, ukulethwa okusheshayo okukhulu
Ngifika ngaphambi kwesikhathi, ayitholakali ukufakazela lokho. Kubukeka kunzima, impahla enhle Umthengisi akakaze abike, kepha ukufika kwayo nokuthunyelwa kwayo ngokushesha bekusebenza. Ngiyabonga. Sanibonani
Isihlungi sekhabhoni esenziwe ngomshini, icwecwe ngokulingene, ukukhanya.